ကျွန်တော်နဲ့ မမသုံးယောက် – Grab Love Story
ဒီနေ့မသန်းကစောစောထတယ်..ကျတော်လည်းစာကျက်နေတုန်း..”မမသန်း.စောလှချည်လား..”..”ဒီနေ့စနေလေ..ဆိုင်စောစောသွားမလို့..”ဪ”””ငါအောက်သွားမလို့..လိုက်ခဲ့ပါဦး”..မသန်းကသရဲကြောက်တက်တယ်..”မမသန်းမြန်မြန်လုပ်နော်..ကျတော်..စာမရသေးဘူ..””အေးပါဟယ်..”ကျတော်လည်း..မမသန်းအိမ်သာတက်နေတာ.ထိုင်စောင့်နေရတယ်..”မမသန်း..မပြီးသေးဘူးလား..ဘာတွေလုပ်နေလဲ..’လုပ်စရာလားဟဲ့.”..”သိပါဖူးဗျာ..ယောက်ကျားက..ခရီးထွက်နေတော့..ဟားဟားဟား…… ”..မင်းမင်း”..နင်နော်..”ပေါက်ကရ.မပြောနဲ့..ငါဗိုက်နာနေတာ..မနေ့က..မရမ်းသီးတွေ.စားလိုက်လို့”..”ကဲပါ…ဖြည်းဖြည်းလုပ်”…ခဏနေတော့..ရေဆေးသံကြားလိုက်တယ်..”’ပြောင်အောင်လည်းဆေးဦး…တော်ကြာ..”..”ဟဲ့.ငါကသန့်ပြီးသား..နင်သာမပြောလိုက်ချင်ဖူး..ဟိုနေ့ကအိပ်နေတာများ…ဟင်း..” ”ကျတော်က..ဘာဖြစ်နေလို့လဲ..””ဘာဖြစ်ရမှာလဲ..နင်ဟာကြီးက..လွှတ်တော့မယ်..ဒုံးကျည်ကျနေတာပဲ..တကတည်း..ထောင်မတ်နေတာပဲ”…”ဟုတ်လား..ကျတော်တောင်မသိဘူး”..ဘယ်သိမလဲ..နင်ကအိပ်နေတာကို”…”ကဲပါ..ပြီးရင်..ဆင်းတော့…စာကျက်ရဦးမယ်..”..”ငါလည်း..နင်ပြောတာနဲ့..ပြောင်အောင်..ဆေးနေတာ..ဟေ့..ပြီးပြီ.”ဆိုပြီး..တံခါးဖွင့်ဆင်းလာတော့တယ်…..””ကဲ..ကိုယ်တော်..စာကျက်လို့..ရပြီ”’..မမသန်းလည်း..အပေါ်တက်..အခန်းထဲဝင်သွားတော့တယ်….
တရေးတမော..အိပ်ပြီး..နိုးလာတော့..မမသန်းပြန်ရောက်နေတယ်..”မမသန်း..ဘာလို့အစောကြီးပြန်လာတာလဲ..”..”ဗိုက်က.အရမ်းနာတဲ့အပြင်..ဇာတ်ကြောတွေပါထို့းလိဲု့..ပြန်လာခဲ့တာ..”..”ဪ..ဆေးလေးဘာလေး..လိမ်းထားလေ”..”ဆေးကတော့.ကိုယ့်ဘာသာလိမ်း..ဇာတ်ကြောတော့ဆွဲပေးမယ်..”..”’အေးဟယ်..လာစမ်းပါ..”..ကျတော်လည်း..အခန်းထဲဝင်လိုက်တယ်..”မမသန်းမွေ့ယာအောက်ဆင်း..ကျတော်.နောက်ကနှိပ်ပေးမယ်”..မမသန်း..ဂုတ်ကိုစတင်နှိပ်ပါတော့..”အ..အ..နင်ကနှိပ်တက်သားပဲ…””..ပါးပါးလေးပဲရှိသေးတယ်..အ..အ…ထိလိုက်တာ..ကောင်းတယ်..ဟ.အား..ကျွတ်..ကျွတ်..မင်းမင်းရယ်..နှိပ်လက်စနဲ့..ငါ့ဗိုက်ပါ…ဆေးလိမ်းနှိပ်ပေးပါလာ…”.”နှိပ်တာကရပါတယ်..ဘေးလူမြင်လို့..မကောင်းဘူး””’ဘယ်သူရှိတာမှတ်လို့..””အာဆို..မမသန်းပက်လက်လှန်လိုက်..အကျီ င်္မ.တင်ထား…ဘယ်နားလေးလဲ..””ဒီနားလေးဆိုပြီး”..ထပ်ဆင့် အပေါ်ကိုပြတယ်..ကျတော်လည်း..ညင်ညင်သာသာလေး..လိမ်းပေးပွတ်ပေးတာပေါ့..မမသန်းကိုကြည့်တော့..မျက်လုံးမှိတ်ပြီးဇိမ်ခံနေတယ်..”မမသန်း..ထမီဖြည်လိုက်မယ်နော်..””အေး.အေး”ထမီဖြည်ပြီးတာနဲ့..ဆီးခုံနေရာလေးကို.ပွတ်လိမ်းပေး..လက်ဖနောင့်လေးက..ဆီးခုံအောက်ကို.မထိတထိလုပ်ပေးနေရင်း..”မမသန်း..အမွှေးတွေရိတ်ထားတာလား..”အေး..”..”စိမ်းနေတာပဲ..ကြည့်ချင်တာ..”ကြည့်ချင်..ကြည့်ပေါ့”..”ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်မယ်…ဆိုပြီး..ဆွဲချွတ်လိုက်တော့..မမသန်းက..တင်ပါးတွေကြွပေးတယ်..”မမသန်း..အဖုတ်ကြီးက..ဖောင်းကားနေတာပဲ..ချစ်စရာကြီး..”နင်ချစ်ချင်နေတာ..အရင်ထဲကသိတယ်..”ဘယ်လိုသိတာလဲ..မမသန်း”..ဘယ်လိုသိရမှာလေ..နင်စာကျက်တိုင်း..ငါအခန်းဘက်လှည့်ကျက်တယ်..ငါရေချိုးရင်..နင်ကြည့်နေတာ..သိသားပဲ..”.”ဟုတ်တယ်..မမသန်းရ..ကျတော်လည်း..မမသန်းအဝတ်အစားလဲတိုင်း..ကြည့်တယ်..ထမီပြင်ဝတ်တဲ့အခါ..ပေါ်သွားနဲ့.ဆီးခုံဖြူဖြူကြီးတွေကြည့်ရတာ..အမောပဲ””.
မခိုင်က..မမသန်းစတိုးဆိုင်က..စာရေးမ..အသားက.ခပ်လတ်လတ်..ဆံပင်ကရှည်တယ်..မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း..ခါးကသေးပြီး..တင်ကားတယ်..မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်တာများတယ်…အိမ်လာရင်တော့..မမသန်း အကျီ င်္တွေဝတ်တယ်..မခိုင်လာတိုင်း..စာပြပေးတယ်..ကျတော်အိပ်မှအိပ်တယ်…
Physics..ပုစ္ဆာ တွေက.concave mirrorနဲ့convex mirrorတွေ..+(or)-သတ်မှတ်တာတွေရှင်းပြပါလား”အဲဒါနဲ့ပဲ..မမခိုင်က.ကျတော့ညာဘက်မှာထိုင်ပြီးရှင်းပြတယ်..တခါတခါ..သူ့ဘယ်ဘက်နို့က.ကျတော့ညာဘက်ဖခုံးကို..တိုက်တိုက်နေတယ်..နို့တွေက..အိနေတာပဲ..သူ့မတိုက်တဲ့.အခါကျရင်..ကျတော်က.နောက်ဖက်မှီပြီးတိုက်တယ်..အသားတွေလည်းနည်းနည်းတော့တုန်နေတယ်..ငပဲကလည်း..အောက်ကနေ..ရုံးရုံးထွက်လာတယ်…ခဏနေ..စာသင်တာပြီးသွားတော့..စကားစမည်ပြောကြတာပေါ့..”မမခိုင်က..အားကစားလုပ်တာလား”..”ဟင်..လုပ်ပါဖူး..ဘာဖြစ်လို့လဲ..”.မေးကြည့်တာပါ”..ကဲ..ဘာကိုကြည့်မေးတာ
. ကိုယ်ခန္ဓာကို..ရှေ့သို့ငိုက်ချလိုက်ပြီး..တင်စိုင်ကြီးများအားပြုကာ..ဆောင့်နေသည်…”ဗြစ်..ဗြစ်..ဗျိ..ဗျိ..ဘွတ်..ဘွတ်..ဒုတ်…အိုး..အိုး..ရှီး..ကွဲသွားပြီ..”မမခိုင်..အားရှိပါးရှိ..ဆောင့်လိုက်တာ..စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေး..ကွဲသွားတယ်….”’..အား..လား..လား..”..မမခိုင်..ညည်းသံတွေက..ကျတော့လီးကို..ပိုမို..သန်မာစေတယ်..”..မမခိုင်..ရယ်..လိုးရတာ.အားမရဘူး….မမခိုင်.ဖင်ကုန်းပေး..”..အေး..အေး”ဆိုပြီး..ချက်ချင်းကုန်းတော့တာ.တင်ပါးကြီးနှစ်ခုကိုင်ပြီး..ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်တယ်..”’ပြွတ်..စွက်..စွက်..ပြွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်.”..”အအား..အအား..အအား..ကျွတ်..ကျွတ်..မောင်းနဲ့ထောင်းနေတာလား..မင်းမင်းရယ်..ပြွတ် ပြွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်..စွပ်..အိ..အိ..အင့်..အင်.့..အင့်..သေပါပြီ”..”..ကျတော်လည်း..မညာတမ်း..စက်သေနတ်ပစ်သလို..ဆင့်ကာဆင့်ကာ..ဆောင့်လိုက်တာ..မအောင့်အီးနိုင်တော့ပဲ..မမခိုင်လည်း..စောက်ရည်တွေ..ဆစ်ကနဲ..ဆစ်ကနဲ့..ထွတ်ကျကုန်သလို..ကျတော်လည်း..သုတ်ရည်ကို..မမခိုင်..စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ..ပန်းထည့်လိုက်ပါသည်…..ဒီနေ့..့..အိမ်မှာ..မမမိုးမှလွဲ၍.ဘယ်သူမှမရှိကြပါ…သူက.Gymဆိုင်ဖွင့်ထားပြီး..တနင်္လာနေ့တိုင်းပိတ်တယ်..အိမ်မှာလုပ်စရာရှိသည်များ..အားလုံးလုပ်ထားသည်။ကျတော်လည်း..ဒီနေ့ဗိုက်နာတာနဲ့..ဆရာမခွင့်တောင်းပြန်လာခဲ့တယ်…
…မမမိုးပါးစပ်မှ…”ဟင်း..ဟင်း..အား..ကျွတ်..ကျွတ်…အင်း..အင်း…ကောင်းတယ်..ကောင်းလိုက်တာ..အား..အား..မင်းမင်း..မောင်လေး..အားမနာနဲ့နော်..ဆောင့်..ဆောင့်..မမမိုး..ခံနိုင်ပြီ…နာနာညှောင့်လိုးပေး..နော်..အား..အား..”..မမမိုး…ကျတော်လိုးတာ..ကောင်းလားဟင်..”..”.ကောင်းတာပေါ့..မင်းမင်းရယ်..”..မမမိုး..ကုန်းပေးပါလား…မောင်လေး..ခွေးလိုးသလို..လိုးပေးမယ်လေ..”..မမမိုး..ဒူးခေါင်းနှစ်ဖက်.. အနည်းငယ်ချဲ..မျက်နှာကို..မွေ့ယာပေါ်.ကပ်လိုက်တော့..ဖင်ကြီးက..ထောင်နေပြီး..စောက်ဖုတ်က..ပြူးထွက်နေတယ်…တင်ပါးနှစ်ဖက်စုံကိုင်ပြီး..စောက်ဖုတ်ကြီးကို..လျှာအပြားလိုက်..ယက်လိုက်တော့..”အို့..”..ဖင်ကြီးပိုထောင်သလိုဖြစ်သွားတယ်..အပေါ်အောက်ယက်လိုက်..စောင်းခေါင်းအတွင်း..လျှာချွန်ပြီးထိုးလိုက်…စောက်ဖုတ်နှုတ်သားတွေကို..လျှာနဲ့ကလော်ထိုးလိုက်..အမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်ကလိပေးသည့်အပြင်….ပွစိ..ပွစိ..စအိုးလေးကို..ယက်ပေးလိုက်တော့..”အို့..အို့..မင်းမင်းရယ်..ဘယ်လိုများလုပ်နေတာလဲကွယ်… …မမမိုး..အူတွေ..အသည်းတွေ..ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီလဲ..မသိတော့ဖူး..မမမိုး..ခုလို..တခါမှ..မခံစားဖူးဘူး…ထပ်မနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့..မင်းမင်းရယ်..မမမိုးကို..လိုးပေးပါတော့…လိုးပေးတော့နော်မောင်လေး..အင်း..အင်း…ဟင်း..ဟင်း..ကျွတ်..ကျွတ်..အ..အ..ဟင်း..အင်း..အမလေး..လေး..အ..အ..”.